The Galaxy A50 na-enweta JerryRig Nlere ule niile | Gam akporosis
Galaxy A50 bu uzo ohuru nke Samsung n’etiti. Ekwentị, nke a na-ere ere kemgbe ọnwa ole na ole na Spen, bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma na mpaghara ahịa a. Ọ bụ ezie na ọ nwebeghị ụfọdụ ntụpọ, n'ihi na n'oge na-adịbeghị anya, a manyere ika ahụ ịmalite mmelite dozie nsogbu WiFi gị. Ekwentị na-ele ule ntachi obi a maara nke ọma ugbu a.
N'ezie, Galaxy A50 na-anwale ule ntachi obi JerryRig. Ọ bụ ule kachasị oke n'ahịa, iji hụ ma Samsung ọ dị n'etiti etiti na-arụ ọrụ nke ọma na arụmọrụ. Ule nke ule a bu otu ihe ahu n’oge ndi ozo.
Ekwentị na-ebu ụzọ nwaa ule mbụ, ebe anyị nwere ike ịhụ na Galaxy A50 na-eme nke ọma. Nwere ike ịgwa ya na ọ na-eji Gorilla Glass na ihuenyo ya, nke na-echebe gị pụọ na nsogbu ndị a, ebe ọ bụ na ọ bụghị ọkwa dị elu mgbe anyị hụrụ akara. Enweela ihe mmetụta dị na ekwentị ahụ nke ọma. Mmebi, n'ụdị ọkọ, na-ahụ naanị ahụ ekwentị.
Mgbe ah Ọ na-agbalị ka nsure ihuenyo nke ngwaọrụ. Dị ka ọ dị na mbụ n'okwu ndị a, mgbe sekọnd ole na ole anyị hụrụ akara na ihuenyo ahụ, n'ihi mmeghachi omume nke ụfọdụ pikselụ. Akara a na-ahụghị mgbe e mesịrị na na n'ozuzu ya na-eme ka o doo anya na ekwentị gafere ule a.
N'ikpeazụ, a Galaxy A50 na-aga ịgbalị mpịakọta. Ọ bụ ule kachasị mkpa na nke a, ebe anyị nwere ike ịhụ na ekwentị na-eguzogide nke ọma. Anyị na-eche ihu igwe na-agbanwe agbanwe, mana ọ gafere ule a na-enweghị ọtụtụ nsogbu. Ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe na-agbaji ma ọ bụ enweghị akụrụngwa, dịka ihuenyo, nke na-esi n'ọnọdụ ya.
Ya mere, anyị nwere ike ikwu na Samsung Galaxy A50 a agafewo ule ntachi obi JerryRig. Mid-range nke Korean brand agafeela ule ya n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị na-eguzogide ọgwụ, ọ bụ ezigbo nhọrọ ịtụle, na mpaghara a n'ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » The Galaxy A50 na-enweta ule ntachi obi kachasị ama